Ọrụ Mgbasa Ozi China na ndị ọrụ | Sunson
Ngwọta Mbupu Nzipu ozi
Anyị ghọtara n'ezie azịza nzipu ozi bụ nhọrọ mbụ maka azụmaahịa e-commerce ka ọ na-enwe ọnụego dị ala. Iji mejuo ọchịchọ ndị ahịa dị iche iche, anyị na-arụ ọrụ na nzi ozi nzi ozi na afọ ndị na-agafe ma na-ewepụ ọrụ ọjọọ site n'oge ruo n'oge. Ugbu a, ndị ọzọ kachasị mma.
China Post na-ekewa n'ime ngwugwu na ngwugwu edenyere aha. Ọ bụ ọrụ ngwugwu mba ụwa maka ngwugwu ndị na-erughị 2KG. China Post na Universal Postal Union ewepụtala ọwa ozi nzipu ozi zuru ụwa ọnụ nke nwere ike iru ọkwa nzipu ozi karịrị mba 200 na mpaghara gburugburu ụwa. Uru nke ozi nzi ozi China: nke akụ na ụba na nke bara uru, iru ụwa, nnabata nnabata ala, nchekwa na nkwụsi ike.
A na-ekewa ngwugwu postal Belgium na ngwugwu awara awara na Belgium ngwugwu zuru ụwa ọnụ, nke bụ maka ngwugwu mba ụwa na-erughị 2KG. Enwere ike izipu ngwongwo Belgium na ihe karịrị mba 20 na Europe, a pụkwara iziga mba Belgium n'ụwa niile na mba 200 gburugburu ụwa, Enwere ike ịjụ ozi nyocha, uru ọrụ nzipu ozi nke Belgium: njikọta otu kọstọm na United Kingdom, mba njem nke abụọ na mba Europe, ụgwọ maka kilogram ọ bụla, nke kwesịrị ekwesị maka obere ọkụ na obere ngwugwu, a na-anabata maka batrị wuru / ngwaahịa batrị na-akwado ya, ọ bụkwa ọrụ kachasị amasị maka nnyefe dị ala nke Europe.
Postnl obere ngwugwu bụ ọrụ awara awara awara awara awara maka ndị na-ere ahịa e-commerce, nke dabere na Netherlands, na-enwete mba Europe niile, na-adabere na netwọkụ post Dutch na sistemu mmezi nke ọma, iji mepụta mpaghara dị elu ọrụ ngwugwu, uru ọrụ nzipu ozi Dutch: ọnụahịa dị oke mma, oge kwesịrị ekwesị, dabara maka ọkụ na obere ngwugwu, ma nwee ike ịnabata ngwaahịa ndị nwere batrị.
E kewara Switzerland Post n'ime ngwugwu elu yana ọwa ngwugwu aha. Ọ bụ ọrụ nzipu ozi kacha elu 5 na UPU ma bụrụkwa ụlọ ọrụ nzipu ozi kachasị ewu ewu na Europe. Ọ nwere alaka ọ bụla n’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba ọ bụla ma nwee ikike nhazi akwụkwọ ozi siri ike. Ọrụ uru: adaba omenala nwechapụ, anụ oge, echekwa uru, adabara ìhè na obere ngwugwu n'ime 2KG.